गुगल एनालिटिक्समा भाषा स्पाम कसरी प्रबन्ध गर्ने - Semalt बाट अभ्यास
ईन्टरनेट विज्ञहरुका तर्कहरु र किवर्ड र गुगल एनालिटिक्स उपयोगकर्ताहरु को लागी रेफरल स्प्याम घुसपैठ अब विगतको कुरा हो। गुगल विश्लेषकहरूले यूआरएलहरू र स्पाम सन्देशहरू कानूनी रूपमा प्रदर्शन गर्दछ जब ह्याकरहरू वा जालसाजीहरूले अनियमित वेबसाइटहरू र GA (गुगल एनालिटिक्स) ट्र्याकिंग कोडमा अनियमित गलत डाटा पठाउँछन्।
सेमेल्टका प्रमुख विशेषज्ञका अनुसार आर्टेम अबगेरियन, फिल्टरको प्रयोग गरेर यो चुनौती सजिलैसँग समाधान गर्न सकिन्छ। यद्यपि, जानकारी स्किउ itself गर्नमा समस्या आउँछ।
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू, साइट मालिकहरू र प्रोग्रामरहरूको लागि नराम्रो खबर यो हो कि ह्याकरहरूले अब जैविक कीवर्ड र रेफरल स्पामबाट उल्लंघन गरेका छन्। स्प्यामरहरू अब अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूलाई भाषा रिपोर्टहरू मार्दै छन्। SEO राउन्डटेबलले समान तीन हप्ता अघि रिपोर्ट लेख्यो।
गुगल एनालिटिक्स सन्दर्भमा, नक्कली ट्राफिकलाई प्रयोगकर्ताको गुगल एनालिटिक्स सम्पत्तीमा पठाइएको नक्कली हिटको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। एक "हिट" ले साइटको साथ प्रयोगकर्ता अन्तरक्रियालाई बुझाउँदछ जुन गुगल एनालिटिक्स सम्पत्तीमा जानकारी पठाउनको परिणाम हुन्छ। उदाहरण को लागी, यो "संक्रमण," "स्क्रिनभ्यू," "घटना," वा "पृष्ठ दृश्य" हुन सक्छ।
एक नक्कली हिट एक बट वा एक प्रोग्राम द्वारा उत्पन्न गरीएको छ मानव व्यक्तिको अन्तर्क्रियाको सट्टा। वर्तमानमा, कुनै पनि Google एनालाइटिक्स हिटलाई नक्कली बनाउन सम्भव छ। यसको मतलब स्प्यामर्सले नक्कल प्रत्यक्ष ट्राफिक, नक्कली जैविक ट्राफिक, नक्कली जैविक ट्राफिक, र नक्कली डाटा पठाउन सक्दछ सोशल मिडियाबाट आएकोबाट। ह्याकर्सले नक्कली भर्चुअल पृष्ठ दृश्यहरू, घटनाहरू, होस्टनाम, अनुरोध URL, लेनदेन वस्तु, र कीवर्डहरू बनाउँदछन्। यसबाहेक, ह्याकर्सलाई गुगल एनालाइटिक्स आईडी तिनीहरूको गन्दा जादू प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ। व्यावहारिक रूपमा, तिनीहरू विश्‍वभर र गुगल एनालिटिक्स खाता पहुँच बिना नै कुनै पनि स्थानबाट एनालिटिक्स जानकारी पुन: लेख्न सक्छन्।
होस्टनाम फिल्टर सेट अप गरेर Google एनालिटिक्समा भाषा स्प्यामबाट छुटकारा पाउन
लेख विशेष रूपमा प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपयोगी छ जसको गुगल एनालिटिक्स भूत र रेफरल स्पामको अनुभव गर्दैछ। यसैले, यो खण्डले Google विश्लेषक रिपोर्टहरूमा नक्कली ट्राफिकको नकरात्मक प्रभावहरूलाई कसरी न्यून गर्ने वा हटाउने बारेमा छलफल गर्नेछ।
धेरै जसो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले तिनीहरूको गुगल एनालाइटिक्समा यस प्रकारको स्पाम प्राप्त गरेका छन्। त्यसकारण, कसरी अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूले यी स्पामलाई हटाउन सक्छन्? यस सम्बन्धमा, सेक्सनले होस्टनाम फिल्टर प्राय स्पामको फिल्टरिंगको लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर वर्णन गर्दछ। तलका चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
१. गुगल एनालाइटिक्सको प्रशासन पृष्ठको भ्रमण गर्नुहोस्
गुगल एनालिटिक्स पृष्ठमा, सबैभन्दा दायाँ स्तम्भमा बटन क्लिक गर्नुहोस् र "फिल्टरहरू" चयन गर्नुहोस्।
२. निलो "फिल्टर थप्नुहोस्" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्
गुगल एनालिटिक्स उत्तम अभ्यासहरू अनुसार यस दृश्यका लागि नयाँ फिल्टर सेट अप गरिनु पर्छ। यसले एकल अनफिल्टर्ड वेबसाइटको ट्राफिक कायम गर्दछ।
Host. होस्टनाम फिल्टर बनाउनुहोस्
गुगल एनालिटिक्स पृष्ठमा, शीर्ष बायाँपट्टि "नयाँ फिल्टर सिर्जना गर्नुहोस्" चयन गर्नुहोस् र उपलब्ध फिल्डमा फिल्टरको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्। "फिल्टर प्रकार" को तहत "पूर्वनिर्धारित" चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि चार ड्रप-डाउन मेनूहरूमा 'मात्र' समावेश गर्नुहोस् '>' ट्राफिक होस्टनाम '> बराबर छ,' तब वेबसाइटको URL प्रविष्ट गर्नुहोस्। अन्तमा, पछाडि नेभिगेट गर्नुहोस् र कानूनी वेबसाइटको ट्राफिकको लागि रिपोर्ट गरिएको होस्टनामहरू जाँच गर्नुहोस्। साइटमा वास्तविक ट्राफिकसँग सम्बन्धित सबै होस्टनामहरू समावेश गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्।
The. साइटको फिल्टर बचत गर्नुहोस्
साधारण फिल्टरले बल्क रेफरल स्पामको ख्याल राख्नु पर्छ जुन साइटमा लोब हुन्छ।